Imisa ciyaaryahan ayey ku leeyihiin kooxaha Real Madrid iyo Barcelona liiska xulka Spain uu ku dhawaaqay Tababare Robert Moreno? – Gool FM
(Spain) 08 Nof 2019. Tababare Robert Moreno ayaa magacaabay liiska xiddigaha xulkiisa qaranka Spain ee ka qeyb galaya kulamada isreebreebka koobka Euro 2020 ay la ciyaari doonaan xulalka Malta iyo Romania.
Xulka qaranka Spain ayaa wuxuu 15-ka bishan November wajihi doonaa xulalka Malta, kahor inta aysan la ciyaarin Romania, kulamada isreebreebka koobka Euro 2020.
Haddaba xiddigaha ku soo baxay liiska xulka qaranka Spain ee uu magacaabay tababare Robert Moreno ayaa waxaa ka maqan da’ayarka kooxda Barcelona ee Ansu Fati iyo Dani Ceballos oo qaab amaah ah ku joogo Arsenal.
Halka sheekada xiisaha badan ay tahay in kaliya shan ciyaaryahan ee ka kala socda kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ay liiskan ku soo baxeen.
Haddaba xiddigaha ku soo baxay liiska xulka qaranka Spain ee uu magacaabay tababare Robert Moreno si ay kaga qeyb galaan kulamada Malta iyo Romania ayaa waxaa kala yihiin:
Joachim Löw oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha xulka qaranka Germany ee ka qeyb galaya kulamada isreebreebka ee Euro 2020